Nei uchisarudza iyo Apple Watch Series 2 uye kwete 1? | Ndinobva mac
Nei uchisarudza iyo Apple Watch Series 2 uye kwete 1?
Yakafananidzwa | | Apple Watch
Ndisati ndatanga kupa nharo uye zvikonzero zvesarudzo yangu yekutenga uye izvo zvandinokuraira, ndinoda kutaura chimwe chinhu. Iyo Apple Watch chishandiso chinodhura nemasikirwo. Iwe haugone kuwana yakachena uye yakasarudzika utility kunze kwekunge iwe uchipa yakawanda yekushandisa kune izvo zviri izvo maapplication uye nekudzidziswa nemitambo mitambo. Padanho iro rakanakisa uye rinoyevedza kupfeka, kunyange paine zvirinani uye zvakachipa sarudzo pamusika. Ini ndinouya kuzotaura chete nezve mutsauko uripo pakati pezvikamu zviviri izvi uye nei uchifanira kusarudza yechipiri uye kwete yekutanga zvichienderana nezvikonzero izvi. Ipapo inyaya yezvido, zvinoshandiswa, bhajeti nezvimwe.
Zvichida chinhu chinokurudzirwa zvakanyanya hachisi chekutenga, asi ini handisi pano kuzotaura nezvazvo. Isu tinotanga kubva papfungwa yekuti tinoda kuitenga uye tinogutsikana. Izvo isu hatine hanya nemutengo, kana zvirinani kwete iwo wepasi mutengo, uye isu tinoda kusarudza imwe kana imwe. Pano tinoenda nechinyorwa ichi.
1 5 zvikonzero zvekutenga iyo Apple Watch Series 2
2 Ita kusvetuka kubva kune yekutanga Apple Watch kusvika kuChikamu 2?
5 zvikonzero zvekutenga iyo Apple Watch Series 2
Ini ndinotetepa iwo musoro wenyaya zvakare. Zvikonzero zvekuzvitenga pamusoro peiyo Series 1, kwete kuzvitenga zvese. Chii chainacho kana chii chazvakanakira kana chakanakira chichaunza icho icho chisina? Apa toenda. Zvino hongu, nhau nezvikonzero zvandinokupa zvinotevera:
Kusvetuka mukuvandudza uye iyo inofungidzirwa chizvarwa 2. Ichi chizvarwa chatakamirira. Uku ndiko shanduko idzo vashandisi vaida zvakanyanya uye dzakakumbirwa nevazhinji. Kune izvo zvatakarwira, zverusununguko uye zveSparta. Zvakanaka, kwete izvo, asi zvakare.
GPS. Zvinoratidzika kunge zvakapusa asi avo vanoita zvemitambo, vanomhanya, nezvimwe, vakazvipotsa. Vazhinji vanoti “Handina basa nekuti igungwa here kana kuti kwete, asi ndinoda GPS. Izvo zvakanaka kwazvo kuve nazvo pane wachi uye kune ramangwana shanduro dzeWatchOS, zvichave zvakanaka kwatiri.
Chidzitiro chakajeka. Ini ndaifunga kuti zvichave chete pane dzimwe nguva kana kune mamwe mabasa, asi kwete. Zvinogara zvakadaro. Musiyano unoonekwa, ndakaita kuenzanisa muchitoro uye zvinoratidza zvakawanda.
Mvura. Submersible 50 metres mumvura. Imwe yacho yakasimba uye iwe unogona kugeza nayo, vanodaro, asi iyo Series 2 haina kuputsika, kana zvakadaro ivo vanozviti. Zvikangodaro, inobhadhara kushandisa € 100 pazviri uye usanetseke nezve kuitora chero nguva. Ngaparege kuva nechinhu chinokutadzisa.
Ndiyo itsva. Ko iko kutenga imwe yacho kuri kusiiwa kumashure. Simba rakafanana, asi kuita kushoma. Zve € 100 zvimwe zvakakosha, ndinofunga. Ndosaka ndakazviita. Icho chidhura chinodhura, hausi kuzvifunga iwe pachako. Iwe zvakare une akawanda akawanda maseru uye mamodheru kusarudza kubva, sezvandatove ndatsanangura. Ini ndinoda Hermes, asi handikwanise, chokwadika.
Ita kusvetuka kubva kune yekutanga Apple Watch kusvika kuChikamu 2?
Hupenzi hukuru, pasina kupokana. Zvinotaridza kwandiri kunge zvisina maturo kuita sekusvetuka kubva ku iPhone 6s kusvika 7. Kubva Muvhuro kusvika Chipiri pane musiyano mudiki. Uye zvakangofanana. Handifunge kuti iwe uchaona shanduko nekuti izvo zvinozivikanwa zvitsva ndeye GPS uye kugona kuve kwemvura uye kupeta kupenya. Kana iwe uchizodzidzira kushambira padanho rehunyanzvi kana repamberi, pamwe hongu, asi mukushandisa kwese handioni chikonzero chekutamba pakati pezvizvarwa zvakavakidzana.
Zvichida neshanduro dzeramangwana rehurongwa hwekushandisa iwe uchaona mutsauko, asi ipapo pachave nezvimwe zvigadzirwa pamusika zvinokurudzirwa kana kudhura, huya, ndinodaro. Uye ndizvozvo Apple iri kushanda pane zvinopfuura Apple Watch chete. Mimwe mishumo uye runyerekupe zvinovimbisa kuti isu tichaona zvipfeko zvemhando dzakasiyana munguva pfupi iri kutevera. Ivo vangangoda kugadzira zvishongo uye mageji asiri iwo mawachi, anodhura zvakanyanya kana anoitirwa chete vatambi. Ndiani anoziva,
Apple iri kuchengeta zvirongwa zvayo pasi pekuputira izvozvi. Asi ini handifunge kuti zvinotora nguva yakareba kuratidza chimwe chinhu chitsva kana zvikadaro. Ehe, usatarisira Apple Watch Series 3 kweinenge gore nehafu kana maviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nei uchisarudza iyo Apple Watch Series 2 uye kwete 1?
IFoto Denoise - yemahara kwenguva shoma
Teregiramu yeIOS inovandudzwa neyemufananidzo mupepeti uye GIF inogadzira